Global Voices teny Malagasy » Miblaogy mikasika an’i India, NRIs, Bokkywood sy ny Cricket An-dranomandry · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Novambra 2018 12:48 GMT 1	 · Mpanoratra Kamla Bhatt Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Azia Atsimo, India, Fampandrosoana, Fanatanjahantena, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna
Nisy mpanangona blaogy iray vaovao tao India niaraka tamin'ny feo hafa. Tapaka ny rohy , fa tato no nahitàna azy ary nantsoina hoe Blog Bharti .
Vao navoaka vao haingana ny Tatitra momba ny Fivoaran'ny Olombelona (HDR) ho an'ny taona 2006. Manana famintinana tsara mikasika an'i India sy ny tatitra HDR  i Alex Thomas ary manontany tena raha toa ka mba misy dikany ny sasany amin'ireo sosokevitra. Manoratra izy, ”Nilazaina im-betsaka ireo vahoaka Indiana fa mampihena ny fahantrany i India ary efa ambanin'ny 30% izany. Marina izany. Am-pahatsiarovana lalandava fa farafahakeliny, mila karama 2000 rupee isambolana ny fianakaviana iray mba hiainana tsara”
Ity misy fomba fijery hafa mikasika ny fiainana ao India ary ireo fanamby amin'ny fividianana trano. Manontany tena amin'ny fomba fividianan'ny olona trano ao Bangalore i Anita Bora . Hitany fa tsy manam-bola amin'izany izy. Fantatrao ve hoe ohatrinona ny iray metatra tora-droa ao amin'ity tanàna ity? 3.000 Rs, izay mitovy amin'ny 75$ eo.
Inona no zava-manjo an'ireo NRI na Indiana Tsy Mponina maharitra rehefa miverina ao India manao fitsidihana fohy ry zareo? Manodidina ny resaka hanina ny tontolo manontolon-dry zareo. Nanana lahatsoratra goavana i GV Krishnan tao amin'ny Desicritics, nitondra ny lohateny hoe: Mandalo Ao Amin'ny Kibony Ny Làlana Mankany Amin'ny Poketrambolan'ireo NRI , (tapaka ny rohy).
Efa miresaka ny NRI ihany, ity no zavatra lazain'i Brajesh avy ao amin'ny Scaling New Heights mikasika ny zavatra azony tao Amerika: fanajana mitovy ho an'ny asa rehetra ao Etazonia .
Nanana lahatsoratra tena nahaliana be mikasika ny Cricket An-dranomamy  tao Estonia, niaraka tamin'ny sary i Huzaifa. Mba iza ary no nieritreritra ny cricket an-dranomandry?
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/29/130982/
 Blog Bharti: http://www.blogbharti.com/
 India sy ny tatitra HDR: http://alexmthomas.wordpress.com/2006/11/10/hdr-2006-and-india/
 Anita Bora: http://www.anitabora.com/blog/2006/11/10/house-hunting-woes-in-bangalore/
 Mandalo Ao Amin'ny Kibony Ny Làlana Mankany Amin'ny Poketrambolan'ireo NRI: http://desicritics.org/2006/11/13/131130.php
 fanajana mitovy ho an'ny asa rehetra ao Etazonia: http://www.sonyvellayani.com/2006/11/one-thing-i-learned-in-america.html
 lahatsoratry ny Plus Ultra : http://chennaikaran.blogspot.com/2006/11/indlish.html#links
 Route 79.: http://route79.org/journal/?p=114
 Cricket An-dranomamy: https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_cricket